I-Sexy Beauty WM 164CM J yeNtloko yeNdebe ye-TPE yabantu abadala abasebenza ngesondo ngo-Charlotte
I-Charlotte Sexy Beauty WM 164CM J yeNtloko yeNdebe ye-TPE yothando
I-Urdolls ikubonelela ngoonodoli abakumgangatho ophezulu besini abenziwe ngumenzi wobungcali iWM Doll. Izinto zeWM Doll TPE zinobuhlobo kwindalo esingqongileyo, azinetyhefu kwaye azinabungozi emzimbeni womntu; idityaniswe nenkqubo yayo yokuqhubela phambili kunye neyodwa, ulusu lomphezulu wesondo oluvelisiweyo ligudile kwaye lubuthathaka, luzele luthambe, kwaye luthambile ngathi lolusu lomntu. Siqinisekisa ukuba uyakufumana unodoli ofanayo nomfanekiso. Nasiphi na isikhundla ngokwesondo sinokwenzeka. Iindlela ze-4 zokuzonwabisa: ubufazi, isifuba, umlomo, kunye ne-anus yokuziva ulwalamano kunye nentombazana yokwenyani. Iimveliso zethu zenziwe ngeyona nto iphambili kwezonyango, kunye nomgangatho wokuqala.
Mna nesithandwa sam sasihlala phantse iyure, ngoko kwakunzima ukubonana rhoqo. Ngenye imini ndaye ndaya emsebenzini wakhe. KwakungeCawa kwaye phantse akukho mntu wangena. Phantse yayinguye yedwa owayelapho. Undikhokele sayongena "eLounge". Saqala ukufumanisa ... ukuziva ... ukuchukumisa ... emva koko wandibuza ukuba ndifuna ukujonga iqhude lakhe. Apho, yayinkulu kwaye inzima. Njengoko sihamba ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza, ndaqala ukumgxotha ngokukhawuleza. Ngaphambi kokuba ndiyazi, ndayifaka emlonyeni wakhe. Emva kwethutyana kushushu, wakhulula ibhulukhwe yam waqalisa ukutyhola ikati yam. Xa wayekhomba kwikati yam, ndamgxotha. Sidibene. Kuhle, kushushu kakhulu, kuba umntu unokungena kuthi nanini na.
Ubude: 164cm J-indebe
Ubunzima :: 34kg
Ubude bengalo: 61cm
Umjikelo wengalo: 22cm
Ubude bomlenze ongaphakathi: 86cm
Isangqa samathanga: 51cm
I-Setlla-eStock California kwindawo yokugcina impahla iSoll sex Doll ehanjisiweyo ...
Stock eCarlifonia. ❤ I-US yokuhambisa ixesha kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zomsebenzi. ❤ 100% Ayinabungozi. Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-52 zesaphulelo. Kuthunyelwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Kushiyeke eyokugqibela kuphela! Lo nodoli wesini ubanjelwe kwindawo yethu yokugcina izinto e-USA kwaye bakulungele ukuthunyelwa. Oonodoli abakwi-stock ...
UMorgan uhleli esihlalweni kwaye ucinga ngopopayi wesini xa edanisa ...
Stock eCarlifonia. ❤ I-US yokuhambisa ixesha kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 zomsebenzi. ❤ 100% Ayinabungozi. Aba nodoli besini babanjelwe kwindawo yethu yokugcina izinto e-USA kwaye bakulungele ukuthunyelwa. Oonopopi abasesitokhweni bagqibelele ukuba ufuna unodoli wokuhambisa ngesondo ngokukhawuleza kwaye awukhathali kangako malunga nokwenza ngokwezifiso. Nje ukuba ...
winni-unodoli wesondo onxibe isuti emhlophe ehleli ecaleni kwebhedi inkangeleko ...
Intombi yam kunye nam samisa ilifti yevenkile yesebe phakathi kwemigangatho emibini kwaye sagqiba ekubeni sonwabe. Ndamnyusa iskirt sakhe sedenim esimhlophe ndiveza ipantyhose yakhe epink. Ebenxibe impahla yangaphantsi enemisonto, iimpundu nezidlele bezibonakala kakuhle ukusuka kwipantyhose ukusuka esinqeni ukuya esinqeni. Njengoko ndandiqengqeleka...
I-Mia WM 164CM J yeNdebe yamabele amakhulu i-Skin TPE Love Doll
Ibali lemvelaphi kaMia: Sisebenza kwisebe elinye nomyeni wethu, kodwa besithandana iinyanga. Umyeni wam usebenza emini, kodwa mna ndisebenza ebusuku. Ngobunye ubusuku, ekugqibeleni savuma omnye komnye ukuba sobabini sifuna ukuqhubela phambili umsebenzi wethu, kwaye ekugqibeleni sabelana ngesondo nge-cyber nge-IM ...
I-Eleanor 158CM C yeNdebe yoLusu lweNdalo Amabele amakhulu ama-WM TPE eSoll Doll
Ibali lemvelaphi ka-Eleanor: Ndandineminyaka engama-32 ubudala kwaye wayeneminyaka engama-20 ubudala. Ubuncinci kunokuthiwa amaxesha okuqala ambalwa xa sasindawonye ayelungile. Malunga neeveki ezimbini kamva, xa umxholo wesini wafika, babethetha emnxebeni. Ndamxelela ukuba phantse iinyanga ezisixhenxe kum, eyothusayo ...
I-Penelope 164CM J yeNdebe ye-TAN Ulusu olukhulu lwebele WM TPE sex Doll
Ibali lemvelaphi kaPenelope: Kwakungo-9: 00 ngokuhlwa kwaye ndandikunye nentombi yam. Sihleli kunye phantse iinyanga ezintathu. Besikule dorm yam wathi ufuna ukufunxa incanca yam. Ndathi ewe, waqala wakhulula iimpukane zam. Ngoku, ndisebenze nzima kakhulu, kwaye u-dick wam uphume evulekile ...
I-Aria-174 CM G-indebe ye-WM yeNtloko yokuKhanya kwesikhumba se-TPE yesondo
Ibali lemvelaphi leScarlett: Ukuqala kwam ukulala ngesondo ndandineminyaka eli-17 ubudala. Isithandwa sam endandikunye naso iinyanga ezisixhenxe sasineminyaka eli-7 ubudala. Sakhe sathetha ngokwenza uthando, kodwa akazange andinyanzele. Ngobunye ubusuku, weza efestileni yam. Ndothuka, ndamyeka wangena egumbini lam ndalala ebhedini naye. Ku ...
U-Ellie-159CM D-indebe ye-WM yeNtloko yokuKhanya kwesikhumba se-TPE yesini
Layla ibali elingemva: Nje ukuba singene endlwini yam, saqala ukukrazula iimpahla zabanye. Wayenexhala malunga nokufota, ke waqala ukufunxa incanca yam. Mkhulu ... ndaqala ukuphulula amabele akhe emva koko ndazama ngako konke okusemandleni am ukurabha iklitori yakhe. Ngamehlo akhe makhulu, wayeka ukufunxa iqhude lam watyhala ...